समाज – Page2– Esancharpati
5 months ago Saturday, December 1, 2018
काठमाडौं, १४ मंसिर । भारतीय सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता एवम् नेपाल मामिलाका जानकार विजय जोलीले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको रिपोर्ट सार्थक नभएकोले भारतले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता जोलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘ईपीजीको प्रतिवेदन तयार पार्नको लागि नेपाल–भारत […]
5 months ago Sunday, November 25, 2018
काठमाडौं, ९ मंसिर ः नेपाल भारत काव्य सन्ध्याको मंचबाट हिन्दी र नेपाली कविताको धमाकेदार प्रस्तुति भएको छ । राजधानी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित नेपाल भारत काव्य सन्ध्या मंचमा नेपाली, हिन्दी, बंगाली, गुजराती लगायतका भाषामा कविता वाचन भएका छन् । हिमालिनी हिन्दी मासिक पत्रीका र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा संचालन भएको काव्य सन्ध्यामा नेपाल […]
लाहान हत्याकाण्डका दोषीलाई जोगाउन चलखेल, जानकारी माग्दा रिसाउन थाले एसपी श्रेष्ठ
5 months ago Monday, November 19, 2018
लाहान, ३ मंसिर । सिरहा प्रहरीले कात्तिक १३ गते हत्या गरिएका जनकपुरका २४ वर्षीय युवक सुमित साहका मुख्य दोषीलाई अहिलेसम्म पक्राउ नगरेको भन्दै पीडित परिवार र आफन्तले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सुमित साहलाई आफ्नै साथी ‘रघु’ भनिने रघुवेन्द्र नारायण चौधरीले सिरहाको लाहानस्थित आफ्नै घरबाट दश मिटर नजिक रहेको पोखरीमा हत्या गरेर फालेको पीडित पक्षको […]
देउसीभैलोबाट सङ्कलित रकमले कपडा वितरण
5 months ago Saturday, November 17, 2018
स्याङ्जा । वालिङ नगरपालिकास्थित बालविद्या आवासीय माध्यामिक विद्यालयका पूर्वविद्यार्थीले देउसीभैलोबाट सङ्कलित रकमले भुम्रे माध्यामिक विद्यालयमा रहेका सुस्तमनस्थितिका दश विद्यार्थीलाई जाडोमा लगाउने स्विटर, टोपी, खाद्यान्नलगायतका सामाग्री शुक्रबार हस्तान्तरण गरिएको छ । विद्यालयका पूर्व विद्यार्थीको समूहले देउसीभैलोबाट सङ्कलित करीब १० हजार बराबरको सामग्री विद्यालयमै पुगेर हस्तान्तरण गरेका छन् । हाल विद्यालयमा सुस्त मनस्थितिका पाँच छात्र र पाँच […]
मोदीले ईपीजीको प्रतिवेदन छिट्टै बुझ्नुहुन्छ ः सल्लाहकार भट्टराई
5 months ago Thursday, November 15, 2018
काठमाडौं, २९ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिट्टै बुझ्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘यसबारेमा हामी दुवै तर्फका सदस्यहरुबीच कुराकानी भैरहेको छ । हाम्रो तर्फका संयोजकले भारतीय संयोजकसँग कुराकानी गरिरहनुभएको छ । अब मोदीले […]
5 months ago Wednesday, November 14, 2018
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको उत्कृष्ट प्रयोग गरी कार्य गरेबापत सरकारी संस्थालाई दिइने ‘डिजिटल गभर्नमेन्ट अवार्ड’ नेपाल प्रहरीले प्राप्त गरेको छ । जापानको एसियन ओसिनियन कम्प्यूटिङ इन्डट्री अर्गनाइजेसनले नेपाल प्रहरीलाई सन् २०१८ को ‘डिजिटल गभर्मेन्ट अवार्ड’ दिएको हो । टोकियोमा २२ कात्तिकमा कम्प्यूटर एसोसिएन नेपाल महासंघका सदस्य डा. अभिजित गुप्ताले एएसओसीआईओका अध्यक्ष डेबिड वाङबाट ग्रहण गरेको […]
काठमाडौं । आगामि मङ्सिर ३ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको शुरुवात हुने भएको छ । नेपालमै पहिलो पटक पाँचथर जिल्लाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण हुन लागेको हो । गत असार ५ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन भइरहेको पाँचथर जिल्लामा यही मङ्सिर ३ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरु गरिने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले […]
‘गाडी दुरुपयोगको समाचार नै नक्कली हो, मैले थप सुविधा लिएको छैन : लालबाबु पन्डित
5 months ago Saturday, November 10, 2018
पार्टीभित्र कुनै समस्या छैन् ः सभापति देउवा
6 months ago Thursday, November 8, 2018
काठमाडौं, २२ कात्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब पार्टी एक ढिक्क भएर अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् । बिहीबार साँझ रिपोर्टर्स क्लब नेपालले देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा आयोजना गरेको देउसी–भैलो कार्यक्रममा पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै सभापति देउवाले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘अब कांग्रेस एक हुन्छ । पार्टीभित्र […]
काठमाडौं, २२ कात्तिक । एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले तीन वटै राप्रपाबीचको एकता प्रक्रियाको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भैसकेकोले अब एक महिनाभित्र एकता हुने घोषणा गरेका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको देउसी–भैलो कार्यक्रममा पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले यस्तो खुलासा गरेका हुन् । उनले भने,‘एकता एक महिनाभित्रै सम्पन्न हुन्छ […]